Mozika miaina: manomboka ny « Angaredona » any Ambositra any | NewsMada
Mozika miaina: manomboka ny « Angaredona » any Ambositra any
Hientanentana ny ao Ambositra sy ny manodidina manomboka androany. Hiaina tanteraka ao anatin’ny famerenan-kasina ny mozika nentim-paharazana sy ny fanomezan-danja ireo karazan-javakanto miaina izy ireo.
Hisokatra androany ny « Festival Angaredona » andiany faha-14 ka toy ny tamin’ny taon-dasa, nihataka ny renivohitra ny hetsika ary mifototra sy efa mahazo vahana sahady any amin’ny distrikan’Ambositra any.
Azo lazaina ho mahazo tombony manokana ny mponina ao antampon-tanàna ao, indrindra ny tanora izay heverina fa mila fahalalana na mangetaheta izany, raha ny tontolon’ny mozika no resahina. Hibahan-toerana, mandritra ny telo andro voalohany, ny fampirantiana karazan-javamaneno sy tahirin-tsary mikasika an’Ambositra, ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambositra II. Ho hita ao koa ireo vokatry ny asa tanana mampalaza iny faritra iny.
Manome sehatra ifanakalozan’ny mpanakanto sy ny mpankafy ny kanto ihany koa ny Angaredona. Manomboka androany koa ny fampianarana mitendry zavamaneno maromaro, toy ny valiha, gitara ary amponga. Miara-dalana amin’izany ny fanofanana mikasika ny fihirana sy ny dihy.
Fa mampiavaka ity Angaredona andiany faha-14 ity ny fisian’ny fifaninanana mozika fototra, toy ny zafindraony, vakodrazana, sodina, sokela ary kidodo. Hifandimby hiaka-tsehatra ireo nisoratra anarana amin’izany, rahampitso sy ny alakamisy izao. Ankoatra izany, manomboka androany ary haharitra telo andro ny « Kilonga milalao », fotoana ifaninanan’ny ankizy manosika kodiarana na kalesa, mandeha amin’ny tongo-daika, sns.